Inoshanda Prototype | Kushanda Prototype - Gadziraproto - Gadziraproto Tech Co, Ltd.
KUSHANDA / Kuedza Kuedza
Kushanda prototyping pamberi pekugadzirwa kwemazhinji kunobatsira kutsimbirira nguva yako uye mutengo mukuunza zvigadzirwa zvitsva kumusika, zvinowirirana neyako dhizaini uye zvinomiririra nenzira yako fomu-yechigadzirwa, kukwana uye basa.
Gadziraproto inotarisa pakuvaka yakanakisa inoshanda prototypes - kunyangwe zviome sei chirongwa chako, isu tinogara tine mhinduro yako.
Edza Yako Dhizaini yeFomu Yakakodzera & Basa
Chii chinonzi Functional Prototype?
Sezvo dhizaini yako ichienderera mberi, iwe uchafanirwa kuwana ekushandira prototypes nekukurumidza nemukati maficha echinhu chechimiro fomu cheki uye bvunzo bvunzo, izvo zvinobatsira kuongorora dhizaini, zvishandiso, simba, kushivirira, gungano, mashandiro ekushanda, uye kugadzirwa
Kushanda prototypes kunogona kubatsira kuratidza uye kugadzirisa yako dhizaini mune yakaoma maitiro ekuyedza. Neye prototypes akagadzirwa einjiniya-giredhi zvinhu mune yakasarudzika yemamwe matekinoroji, iwe unogona kuratidza kuti chigadzirwa chako chinoita sei pamberi pemusika kugadzirwa.
Muchokwadi, kuvaka zvinoshanda kana zvinoshanda prototypes zvakakosha uye zvinofanirwa kutariswa sedanho rinodiwa panguva yeNew Product Introduction (NPI) maitiro. Inowanzoonekwa se "Inishuwarenzi Policy" usati wazvipira kune inodhura mashoma kugadzirwa kumhanya.
Iwo Anoshanda Ma prototypes Anowirirana Kwekupedzisira Zvigadzirwa
Uchishandisa zvakafanana zvinhu sechigadzirwa chekupedzisira, chaizvo ita basa remuchina, makemikari anodzivisa, zvimiro zvinopisa zvemugumo unoshandisa chigadzirwa.
Kugadzira prototype yakaoma kunzwisisa yekushandisa mafomu kutarisa fomu uye kukwana, uye kuona kuti zvikamu zvese zvinokwana mukati megungano.
Kugadzira yakakwira-chaiyo inoshanda prototypes kuyera, kuenzanisa, kana kutarisa dhizaini dhizaini, yemhando misiyano uye kushivirira zvinogamuchirwa.
Inoshanda yemaziso prototypes inotsigira photometric kuvandudza ouinjiniya kuyedzwa, kusanganisira oparesheni kutapurirana, refractive index uye transmittance, nezvimwe.
Uchishandisa zvinowedzera-kuisa, mahinji ehupenyu, kana kuwanda pamusoro kuteedzera mashandiro echigadzirwa uye nekubatanidza iyi mienzaniso muchiratidzo chinoshanda chinomhanya kunge chigadzirwa chekupedzisira.
Kuvaka zvinoshanda prototypes zvakare inzira yakanaka yekukurumidza kuyedza kumeso kupera, dhizaini uye kunzwa kwezvinhu zvakasiyana pane chako chekupedzisira chigadzirwa.
Reka Makomborero kubva kuKushanda Prototype
Isati yagadzirwa yakawanda, zvakakosha kuti ugadzire zvinoshanda prototypes kuona kuti dhizaini yako inosangana nezvaunotarisira, kugadzirwa uye zviyero zveindasitiri.
Bvunzo dhizaini iterations uye gadzirisa yako chigadzirwa kuita.
Natsa uye gadzira chigadzirwa chako kuti ugone kuenda kuzere kugadzirwa uine chivimbo.
Taurirana mazano kune vanobatika nekukurumidza; ratidza kukosha kwechirevo kune vangangoisa mari nevatengi.
Rega chero nyaya dziwanikwe nekugadziriswa zvakanaka usati wazvipira kune inodhura yekugadzira zvigadzirwa.
Iva nechokwadi chekugona kweprojekiti yekugadzira; ita kuti chigadzirwa chako chiende kumusika nekukurumidza nemutengo unodhura.
Chengetedza pfuma yako mumba.
Kushandisa Yakakodzera Prototyping Technology kutevedzera Kugadzira
Nesimba Redu Rese Kuona Kubudirira KweProjekiti Yako
GadziraProto inoshandisa akasiyana siyana matekinoroji uye zvishandiso zvakasanganiswa neyechinyakare maitiro ekugadzira echokwadi uye akasarudzika anoshanda maitiro KuPeopleProto, tinopa huwandu hwesarudzo yekuvandudza zvigadzirwa kubatsira vagadziri, mainjiniya uye vagadziri kugadzira uye kuongorora zvigadzirwa zvitsva nekukurumidza, mune zvehupfumi uye nenjodzi yakaderera.
Nepamberi yekukurumidza prototyping tekinoroji, tinogona kushandura dhizaini yako ive yechokwadi mumazuva mashoma chete. Iwe uchawana rairo yehunyanzvi inokodzera zvakanyanya zvaunoda, kungave kuri mukuyedza fomu, kukwana uye mashandiro eprototypes, kana sekungova pokutangira kune chero edu epazasi ekugadzira masevhisi. Izvi zvinobatsira kuti uwane yepamusoro data dhata mune ako ekushanda bvunzo uye uunze chitupa chivimbo.
Semunhu akasarudzika prototype mugadziri, CreateProto yakanangana nekuratidzira kugadzirwa kwenguva yakareba uye inowana mukurumbira wakanaka pazvikamu zvinoshanda. Tinogona kukupa iwe inogutsa prototypes inogadzirwa neyakanyanya nzira nzira zvisinei neCCC machining, yekutsiva yekurasa kana kukurumidza tooling mualuminium mafomu.
CNC machining inowanzo shandiswa mukugadzira zvinoshanda prototypes uye zvigadzirwa zvigadzirwa, zvakakosha kune zvigadzirwa kuvandudza uye mainjiniya. Icho chiitiko che "kudzikisira kugadzira", kutora zvigadziriswe uye zvoga michina maturusi ekugadzira chidimbu chesimbi kana plastiki nekubvisa zvinhu nekugaya, kutendeuka kana kukuya zvinodzorwa nekombuta. Iyi tsika yechinyakare inogadzira simba rakakwirira uye kupedzisa kwepamusoro kupfuura chero humwe hunyanzvi hwekuratidzira.
CNC machining inopa akasiyana siyana einjiniya-giredhi zvinhu kusarudzwa, ichibvumidza inoshanda prototype kuve neyakada zvinhu zvivakwa nepo zvakare ichisimbisa yakanakisa mativi kushivirira. Saka, iyi ndiyo nzira yakanakisa yekuyedza prototype yefomu kukodzera uye basa.
Urethane Vacuum Kukanda
Vacuum Kudzingwa inowanzo shandiswa kune anoshanda prototypes kugadzirwa nediki dzakateedzana (gumi kusvika makumi mashanu makopi). Kazhinji, kuumbwa kunoitwa kubva kune silicone rabha uye kushandisa iyo CNC kana SLA chikamu senge tenzi pateni. Izvi zvinoumba zvakapetwa uye zvinyorwa uye zvinopa zvinoenderana zvinopedzisa kubva kune chimwe chikamu kuenda pane chinotevera.
Mhando ye polyurethanes ine akasiyana epanyama masisitimu inogonesa iwo ma prototypes mukushanda kwekuyedza pasi pemamiriro ezvinhu akasiyanasiyana kusanganisira meya mutoro, chafariz mutoro uye kumwe kutendeka kwekuedzwa Iwe unogona zvakare kuwana yekugadzira-senge mhedzisiro inosanganisira mavara, magumo, magadzirirwo uye zvakapfava kunzwa. Inokurumidza mukugadzira tsika uye yakaoma diki batch kugadzirwa zvikamu pane neyakajairwa kuumbwa uye jekiseni kuumbwa, uye ichavandudza kugona kwako mukuvandudza.
Inokurumidza Tooling muAluminium Moulds
Rapid aluminium tooling inzira inokurumidza uye isingadhuri yepurasitiki kuumbwa; haigone chete kugadzira mazana eanoshanda bvunzo prototypes padyo nechokupedzisira chigadzirwa, asi zvakare inopa pane-kudiwa kugadzirwa kwemagumo-ekushandisa zvikamu zvekudzika-vhoriyamu yekugadzira.
Rapid jekiseni Kuumbwa kunopa sarudzo iri nani kune avo vatengi vanoda yakaderera vhoriyamu bvunzo zvikamu. Panguva imwecheteyo, ichakwanisa kuvhara musiyano uripo pakati pekuenzanisira uye kugadzirwa, kuita kuti bvunzo dzako dzinoshanda uye fomu-dziitwe nekukurumidza, dzinokutendera kuti uratidze vangangove vatengi chigadzirwa chaicho chakapedzwa, uye rega chero nyaya dziwanikwe nekugadziriswa zvakanaka pamberi pavo vachiendeswa mukugadzirwa.
Kukurumidza kushandisa zvishandiso kunowanzo kuve nemutengo unodhura pane wekugadzira chakuvhuvhu nekuda kwekukurumidza mukuvaka uye ipfupi kutenderera nguva, saka iterative dhizaini shanduko kazhinji inodhura.
Kukurumidza Prototyping, Kurumidza Prototyping, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Cnc Kuchengetedza, Cnc Rapid Prototyping, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira,